लकडाउन खुलेसँगै ०.८ प्रतिशतले बढ्यो संक्रमण, काठमाडौंमा आज कति थपिए संक्रमित ? - Lokpath Lokpath
२०७७, १७ श्रावण शनिबार १६:३६
लकडाउन खुलेसँगै ०.८ प्रतिशतले बढ्यो संक्रमण, काठमाडौंमा आज कति थपिए संक्रमित ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ श्रावण शनिबार १६:३६
काठमाडौं – बितेको २४ घण्टामा थपिएका ३१५ जना संक्रमितमध्ये ५ जना काठमाडौंका संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला (काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुर) लगायत घना बस्ती भएका शहरमा कोरोनाको जोखिम बढीरहेको भन्दै मन्त्रालयले लकडाउन खुलेसँगै (साउन ७ गतेबाट १७ गतेसम्मको अवस्थामा) ०.८ प्रतिशतले संक्रमण बढेको जनाएको छ।
सेनिटाईजरको प्रयोग गर्न सचेत गराएको छ । नेपालमा हाल ५ हजार ३ सय ३८ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये ७२ दशमलव १ अर्थात १४ हजार ४ सय ९२ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र थप ९३ जना कोरोना मुक्त भइ घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । आज (शनिबार ) थपिएका संक्रमित समेत गरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २० हजार ८६ पुगेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ५६ जनाको मृत्यु भएको छ ।